Bogga ugu weyn 15 Shabakado Bilaash ah oo loogu talagalay Dadka Jecel Buugga 2022 | Hel Helitaan cusub
Waxaa laga soo xigtey: Shutterstock
15 Shabakado Bilaash ah oo loogu talagalay Dadka Jecel Buugga
#1. Akhris wanaagsan
#2. Amazon shidin
# 3. BookFinder.com
#4. Buugaagta Google
#7. Maqli karo
#9. Suugaanta Korontada
#13. Indho -indhe
#14. Buugga buugga
#15. Buugaagta Powell
Wax -akhrisku waa tigidh qiimo -dhimis ah oo meel walba lagu tago iyo aalad muhiim u ah aqoonta iyo xorriyadda. Marka, haddii aadan rabin inaad ku gabowdo addoonnimada, waa inaad wax akhridaa.
Oo haddii aad hore u jeclayd buugga laakiin aad ka welwelsan tahay miisaaniyaddaada wax -akhriska, waxaa jira degello badan oo bilaash ah oo loogu talagalay kuwa jecel buugga sidaada oo kale. Taas macnaheedu waa inaadan bixin doonin wax badan si aad u iibsato, u daalacato, ama dib ugu eegto nooc kasta oo buug aad rabto.
Goobahan, waxaa suurtogal ah 100% inaad ka hesho nooc kasta oo buug aad rabto, ha ahaato buug -akhris, buug majaajilo ah, jaceyl, ama buug -kariye. Gaar ahaanna, waxaad ku lug yeelan kartaa doodda, dib u eegista, iyo wada sheekaysiga firfircoon ee ku yaal goobahan.
Maqaalkan waxaan daaha ka qaadnay liis dhamaystiran oo ah 15 goobood oo bilaash ah oo loogu talagalay dadka jecel buugaagta oo leh astaamo u gaar ah oo ka dhigi kara waxqabadkaaga wax-akhris mid qiimo leh.
Halkan waxaa ah liis ay ku qoran yihiin 15 websaydh oo bilaash ah oo loogu talagalay dadka jecel buugga:
Waxyaabaha loo yaqaan 'Goodreads'
#1. Waxyaabaha loo yaqaan 'Goodreads'
Goodreads waa mid ka mid ah mareegaha loogu talagalay dadka jecel buugga ee bixiya adeegyo lacag la'aan ah. Waxay la mid tahay bulsho dhex -dhexaad ah oo aad ka heli karto nooc kasta oo buug ah oo aad rabto. Madalku wuxuu kaloo leeyahay muuqaal kuu oggolaanaya inaad la socoto buugaagta aad akhriday illaa hadda.
Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan Goodreads waxaa ka mid ah bixinta buugga, helitaanka iOS, Android, iyo biraawsarka, oo loo qoondeeyay naadiyada buugaagta iyo noocyada, iyo talooyinka buugga ee shaqsiyeedka.
Markaynu u nimaadno dhibkeeda, goobtu waxay leedahay xulasho kooban oo eBooks ah oo la akhriyi karo waxayna kaliya bixisaa muunado horudhac ah inta badan buugaagta halkaas ku yaal, taas oo aan ku habboonayn akhristayaasha intooda badan.
Websiteka rasmiga ah Link
Waxa kale oo aad xiiseyn kartaa 45 Siyaabood oo carruurta loogu helo buugaag Bilaash ah 2022
Amazon waa degel kale oo xiiso leh oo loogu talagalay dadka jecel buugga. Amazon, waxaad ka heli kartaa eBooks, buugaag daabacan, buugaag dhif ah, iyo nooc kasta oo buug ah oo aad ka fikiri karto.
Sidoo kale, goobtani waxay leedahay astaamo aad u xiiso badan oo kaa caawin kara akhriste inaad ku raaxaysato safarkaaga akhriska. Waxaad iftiimin kartaa qoraalka, turjumi kartaa ereyada, beddeli kartaa farta iyo cabbirka bogagga oo xitaa raadin kartaa macnaha erayga markaad akhrinaysid.
Sida Goodreads, goobta Amazon Kindle waxay ku jirtaa Android, iOS, Windows iyo sidoo kale aaladaha Blackberry.
Sifada kaliya ee inta badan isticmaalayaasha mareegahaan ka xanaaqaan ayaa ah xaqiiqda ah in dib u eegista buugaagta ay aad u kooban yihiin si ay u caawiyaan. Marka laga soo tago taas, Amazon waa doorasho wanaagsan oo loogu talagalay dadka raba inay wax akhriyaan.
Sida magacu u dhawaaqo, BookFinder wuxuu ka mid yahay websaydhada ugu fiican oo aad ka heli karto buugaag la akhrin karo. Ma aha oo kaliya helitaanka buugaag, waxay leedahay astaamo kuu oggolaaneysa inaad isbarbar dhig ku sameyso qiimaha buugga inta u dhexeysa ilo badan waqti isku mid ah.
Bogan, waxaad ku hubsan kartaa inaad hesho buugaag la isticmaalay, buugaag dhif ah, buugaag duugoobay, iyo sidoo kale buugaag waxbarasho.
Waxa xiisaha lihi leh, goobtani waxa ay abuurtaa isbarbardhigga qiimaha buugaagta, waxa ay baadhaysaa wax-ikhtiraacyada in ka badan 100,000 oo iibiyayaal ah, waxaanay ku takhasustay raadinta buugaagta iyo dib-u-iibsashada.
#4. Buuga Google
GoogleBooks waa goob kale oo xiiso leh oo runtii loogu talagalay dadka jecel buugga. Buugaagta Google ayaa kuu oggolaanaya inaad raadiso buugaag nooc kasta ah. Waxaad heli kartaa buugaag, joornaalo, joornaalo iyo sidoo kale ebooks.
Doorashadani waxay leedahay qalab raadin oo kuu ogolaanaya inaad qeexdo sida erayadaada muhiimka ah loogu isticmaalo raadinta. Waxa kale oo ay leedahay filtar kuu ogolaanaysa inaad ku shaandhayso ciwaanka, qoraaga, mawduuca, taariikhda daabacaadda, ISBN, iyo ISSN.
Dib u dhaca kaliya ee inta badan isticmaalayaasha madalkani ay la kulmaan waa xaqiiqda ah in aysan si fudud u socon karin. Xitaa taas, Google Books waxay caddaysay inay tahay mid ka mid ah mareegaha ugu fiican ee buugaagta jecel.
AddALL waa erey raadinta buugga ee isbarbar dhigga dukaamaysiga oo kuu oggolaanaya inaad ka raadiso buugaag ururinta ballaaran oo laga soo xulay dhowr buug -gacmeed oo internetka ah. Waxaad ku soo koobi kartaa raadintaada erey, meesha maraakiibta, gobolka, iyo lacagta.
Goobta buuggani waxay la jaanqaadeysaa qiimaha buugga in ka badan 100,000 oo iibiyeyaal ah oo ka kala yimid boqollaal goobood halmar. Waad hubtaa inaad ka heli doonto heshiiska ugu fiican halkan.
SCRIBD waa degel adag oo akhrintaada ka gudbi doona xadka buugaagta. Deeqdan ayaa adiga loogu talagalay haddii aad xiisaynayso aragtida khabiirka, ciyaarista biyaano, iyo helidda wararka.
Maktabadda baaxadda leh ayaa isku dhafan dhinacyada ugu wanaagsan ee Audible iyo Kindle Unlimited. Natiijo ahaan, mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan ee loogu talagalay dadka jecel buugga ayaa hadda loo heli karaa Android iyo IOS labadaba.
Buugaagta maqalka, Audible waa doorashada ugu fiican. Maaha wax lala yaabo, marka la eego baaxadda maktabaddeeda iyo is -waafajinta hawlgalkeeda.
Sababtoo ah Asalka Audible ee asalka ah, aruurinta hal abuurka kooxda Amazon, Audible waa marti -geliye joogto ah liisaska barnaamijyada buugga ugu fiican.
Intaa waxaa sii dheer, barnaamijku wuxuu la jaan qaadayaa aalado aad u ballaaran, oo ay ku jiraan taleefannada casriga ah, aaladaha guriga ee caqliga leh, alaabada Amazon, laptops, kombiyuutarro, iyo aalado kale oo kala duwan.
Waxa kale oo aad xiiseyn kartaa Faallooyinka Maqalka ah ee 2022: Ma mudan tahay | Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka Maqalka
Blippr waa mid ka mid ah shabakadaha bilaashka ah ee loogu talagalay dadka jecel buugga. On Blippr, waxaad ka heli kartaa faallooyin gaagaaban oo aan ka badnayn 150 xaraf oo wata buugaag, filimaan, muusig, ciyaaro, iyo codsiyo kala duwan.
Waxa xiisaha lihi, madalku wuxuu kaloo kuu oggolaanayaa inaad ku xirnaato xisaabaadka kale ee warbaahinta bulshada markaad leedahay koonto.
Xaqiiqda kale ee xiisaha leh ee ku saabsan goobtan ayaa ah inay maalin walba iska fiiriso shabakadda qiimayaasha ugu fiican wax kasta oo adeegsadeyaashu xiiseeyaan.
Suugaanta Korontadu waa mid ka mid ah mareegaha bilaashka ah ee loogu talagalay dadka jecel buugga. Websaydaan ayaa si joogto ah u daabaca waxyaalo cusub oo hal abuur leh, oo ay ku jiraan sheekooyin gaagaaban oo gabayo ah oo lacag la’aan ah, dhaleeceyn suugaaneed, wareysiyo, xogogaal xiiso leh, liisaska buugga, iyo inbadan.
Markaa, waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah aaladaha aan macaash doonka ahayn ee bixiya dhammaan qorayaasheeda, taasoo ka dhigaysa urur aad u fiican inuu ku caawiyo!
On Electric Lit, waxaad ka heli kartaa talooyin buugaagta dhammaan noocyada iyo mawduucyada xiisaha leh, laakiin sidoo kale qorayaasha, filimada, baloogyada, iyo xitaa dukaamada buugaagta.
Marka laga soo tago soo jeedinta suugaaneed, waxaa ku jira dib u eegista buugaagta, filimada, muusigga, iyo wixii la mid ah, iyo sidoo kale darajooyinka shaqooyinka suugaanta iyo qaybaha fikirka. Waxa kale oo ku jira kaydka laba joornaal suugaaneed, “Akhris lagu taliyay” iyo “Socdaal”, oo aad ka akhrisan karto qormooyin, sheekooyin gaagaaban, iyo gabayo.
Guud ahaan, Suugaanta Korontadu waa degel fantastik u ah akhristayaasha oo raadinaya inay ballaariyaan liiskooda aragtiyada akhriska oo ay ka helaan aragtiyaha bulshada suugaanta iyada oo loo marayo dib -u -eegista buugga iyo talooyinka.
Waxa kale oo aad xiiseyn kartaa 15 Meelaha Ugu Fiican ee Lagu Iibiyo Buugaagta Casharrada 2022 | Khadka Tooska ah & Khadka Tooska ah
Gurulib waa goob kale oo ugu fiican dadka buugta jecel. Goob sida Gurulib, waxaad ku hubsan kartaa inaad ka hesho buugaag habaysan meelo kala duwan.
Waxa kale oo aad heli kartaa filimaan, muusig, ciyaaro, iyo ururinta software. Moreso, oo ah aqriste summaddeedka, goobtu waxay leedahay kaamirooyinka webka oo aad u adeegsan karto baarista alaabta.
Waxa ku xiga liiskayaga waa ReadPrint. ReadPrint waa mid ka mid ah goobaha buugaagta jecel ee bilaashka ah ee jira. Websaydhkan wuxuu ka dhigayaa in ka badan 2 kun oo buugaag lacag la'aan ah adeegsadeyaasheeda si ay ugu akhristaan ​​internetka iyagoon bixin lacag.
Waxba ma aha nooca buugga aad raadinayso, ha ahaato buugaagta sharciga, buugaagta carruurta, Shakespeare, Caafimaadka ama khiyaaliga, ReadPrint ayaa daboolay.
Arrin kale oo xiise leh oo ku saabsan goobtan bilaashka ah ee loogu talagalay dadka jecel buugga ayaa ah inay leedahay naadiyada buugga iyo kooxaha oo ay ku jiraan qaybta xigashada Qoraaga. Dhibta ugu weyni waxay tahay in qaar ka mid ah buugaagtiisu ay jareen xiriirro taas oo aan ahayn warbixin wanaagsan haba yaraatee.
Alibris waa kheyraad aad u fiican buugaagta iyo buugaagta la isticmaalo, buugaag dhif ah, buugaag aan la daabicin, iyo waxyaabo kale. Kani waa mid ka mid ah ilaha ugu wanaagsan ee onlaynka ah ee buugaagta laga helo daabacayaasha madaxa bannaan.
Waxaa jira in ka badan 170 milyan oo buugaag, iyo sidoo kale in ka badan 100 milyan oo waxyaalood oo kale sida filimada iyo muusikada. Adigoo adeegsanaya aaladda raadinta buuga sare ee Alibris, waxaad ka heli kartaa buugaag ay leedahay ISBN, ereyga muhiimka ah, maadada, qoraaga, iyo cinwaanka. Waxaad sidoo kale ku shaandheyn kartaa buugaagta u -qalmitaanka maraakiibta bilaashka ah, luqadda, qiimaha, iyo daabacaha.
Xaqiiqda kale ee xiisaha leh ee aad u baahan tahay inaad ka ogaato Alibris ayaa ah inay jiraan qaybo buugaag dhif ah, marin -habaabin sahlan, iyo ku -habboonaansho iibsashada adeeg -bixiyeyaal badan.
Waxa kale oo aad xiiseyn kartaa 30 Buugaag Maalgashiga ugu Fiican oo 20 Bilyaneer ay ku taliyeen 2022
Blinkist ayaa ah doorashada ugu fiican ee dadka dhowaan bilaabay inay wax akhriyaan inta lagu jiro karantiilkan. Sidoo kale waa ikhtiyaar aad u fiican kuwa raadinaya inay sare u qaadaan xirfadahooda farsamo inta ay socdaan. In ka badan 3,000 oo ah kuwa wax iibiya ayaa ku jira ururinta.
Marka la soo koobo, Blinkist waxaa ka buuxa fikrado hal-abuur leh oo awood u leh inay noloshaada wax ka beddelaan.
Waxa xiiso leh, waxaa laga heli karaa macruufka iyo Android. Sidoo kale, waxay leedahay hab dhegaysiga iyo akhriska oo aad si xor ah u samayn karto doorashadaada oo ku salaysan midka aad ku qanacsan tahay.
Buug -yaraha waa mid ka mid ah mareegaha ugu fiican dadka jecel akhriska. Websaydhku wuxuu asal ahaan ku taliyaa buugaag ku saleysan dhadhanka qofka. Markaad soo gasho sidii isticmaale ahaan, goobtu waxay baran doontaa dhadhankaaga marka loo eego buugaagta aad jeceshahay akhrinta.
Waxay kaloo bixisaa qiimo dhimis cajiib ah ebooks, buugaag maqal ah, iyo buugaag daabacan, iyo sidoo kale noocyo kala duwan oo ikhtiyaarro ebook ah oo lacag la'aan ah. Boggaaga bogga waxaa loo habeeyay dhadhankaaga, dalabyada la soo bandhigayna waxaa lagu saleeyay dookhyadaada.
Moreso, goobtu waxay leedahay astaamo u saamaxaysa adeegsadeyaasheeda inay dhex maraan dhammaan buugaagta iyo heshiisyada iyagoo raadinaya liisaska ballaaran ee mareegaha uu hayo. Xaqiiqda kale ee xiisaha leh ee ku saabsan boggan ayaa ah inaad ka hubin karto qiimayaasha buugaag kala duwan websaydhyo kala duwan adoo adeegsanaya Bookbub.
Oo waxaad ka arki kartaa dib -u -eegista iyo qiimeynta buugaagta xubnaha websaydhka, waxaad abuuri kartaa liis buug oo waxaad kaydin kartaa dhammaan akhrinta aad rabto inaad ku samayso liiskaaga, oo samee liistada liiska buugga.
Buugaagta Powell, oo ganacsi ku jiray tan iyo 1971-kii, wuxuu bixiyaa buugaag aad u kala duwan oo kala duwan, laga soo bilaabo qadiimiga taariikhiga ah ilaa buugaag is-daabacay.
Bogga guriga waxaa ku jira bogag loogu talagalay kuwa wax iibiya, bil walba, iyo dhacdooyin gaar ah sida Bisha Taariikhda Madow. Tani waa meel fiican oo laga bilaabi karo, laakiin sidoo kale waxaad ku raadin kartaa laba iyo toban maaddo iyo dadka cusub ee yimid.
Powell wuxuu leeyahay sheekooyin garaafyo iyo buugaag aad dhif u tahay inaad ka hesho mareegaha kale ee buugga.
Booqashada mid ka mid ah shabakadaha aan kor ku soo sheegnay si aad u iibsato buugaag ayaa kaa caawin kara inaad kaydsato. Waxaad sidoo kale hubin kartaa inaad haysato buugag kala duwan oo aad u badan oo laga yaabo inaadan ogayn inay jiraan.
15 Meelaha Ugu Fiican ee Lagu Iibiyo Buugaagta Casharrada 2022 | Khadka Tooska ah & Khadka Tooska ah
15 Shirkadaha Tamarta Tamarta ee ugu sarreeya sanadka 2022
Dib -u -eegista Knetbooks 2022: Knetbook Legit Ama Fadeexad | Siduu U Shaqeeyo
Tusmada Tusmada Qari Waa maxay Kaarka Lambarka Bulshada? Waa maxay Noocyada Kaarka Lambarka Bulshada? Waa maxay…
Tusmada Tusmada Qari Waa maxay Riyada Maska?Sigmund Freud's View:Religious View:Indian ViewAfrican View:Final ThoughtsReferencesTalo soo jeedin Massku waa mid ka mid ah…
Tusmada Tusmada Qari Tusmada Maxay ka dhigan tahay Qof lacag la'aan ah? Lacag intee le'eg…
Jadwalka Mawduucyada Qari Waa Maxay Deynta Kaarka Amaahda? Maxaa Keena Deynta Kaarka Amaahda? 1. Kordhinta2 Gurmad la’aan…
Jadwalka Mawduucyada Qari Tusmada Miyuu Miskiinku Sabool Noqonayaa?
Tusmada Tusmada Qari Tusmada Maxay yihiin Dhibaatooyinka Maaliyadeed ee Dadku haystaan?